Pasipoti yekudzivirira IBM neNew York. Chirongwa chinokatyamadza | Linux Vakapindwa muropa
Pasipoti yekudzivirira IBM neNew York. Chinhu chinokatyamadza
Kubva pakatanga denda re COVID-19, pakave nekutaurwa kweanonzi mapasipoti ekudzivirira. Icho chinyorwa icho Izvo zvaizozivisa vanhu avo, nekuda kwekutambura chirwere kana kubayiwa jekiseni, vangave nemukana mushoma wekurwara. Naizvozvo, ivo havafanirwe kunge vari pasi pemitemo imwechete sevaya vasiri muchikamu ichocho.
Chikumbiro chakakonzera kunyunyuta kwakawanda neavo vanozviona sekutyisidzira kurusununguko rwemunhu.s sezvo isiri chete inofambisa kuteedzera kwevagari, iri zvakare nzira yekuvamanikidza kushandisa majekiseni ayo, nekuda kwekukurumidzira, asina kutevedzera zvakajairika mvumo matanho. Pamusoro pezvo, zvirevo zvakaitwa zvinowanzoomera kune avo vasina hunyanzvi hwehunyanzvi.
1 IBM neNew York Pasipoti yekudzivirira
2 Kusahadzika kwangu
IBM neNew York Pasipoti yekudzivirira
Excelsior yakabatanidzwa pamwe chete neBMM neNew York State mumavhiki masere chete. Iyo webhusaiti inogadzira QR kodhi. Iyi kodhi inobvumira vanhu vakabaiwa jekiseni kana kuyedzwa vasina kweECVID-19 vanokurumidza kupinda chero kupi, kubva kuzviitiko zvakakura munzvimbo dzeveruzhinji kusvika kudiki uye zvakanyanya zviitiko. semichato. Masangano akazvimirira anoshuvira kuita kutonga kuburikidza neExcelsior Pass anogona kuzviita pasina muripo; zvese zvaunoda mushandi ane smartphone.
Iko kushanda kwechishandiso kunokwanisika nekuti New York State ine dhatabhesi iyo inoteedzera vanhu vakabayiwa jekiseni. Iyo zvakare inoteedzera yega COVID-19 bvunzo izvo zvinouya kubva kumazana emarabhoramu akasiyana.
Kana munhu akasaina pawebhu, iyo data yakapinda ichaenzaniswa neNew York State dhatabhesi. Izvo zvinogadzira kodhi yeQR iwe yaunogona kuprinda, kurodha pasi kune yako foni kana kutora mifananidzo ine kamera . Chero ani anodzora mari yacho chete anofanira kuitora kuti awane ruzivo.
Excelsior ine njodzi. Kungova nehupenyu hweumwe munhu, chero munhu anogona kuratidza kodhi yeQR inoratidza kuti vakabayiwa kana vasina kutapukirwa. Naizvozvo, vashandisi vanogona kudiwa kuti varatidze chitupa.
Dzose dziri mbiri chinyorwa chandakadudza pamusoro sosi sosi, uye iyo kubva kuWashington Post iVanosimbirira kuti zvakavanzika zvemushandisi zvinovimbiswa. Kunyangwe pasina anopa chero humbowo kutsigira izvo zvataurwa. Iyo Post yakatosvika padambudziko rekutsoropodza hurongwa uye kuiisa muyedzo mune chaiko nyika. Akaona kuti mune dzimwe nguva zvinonetsa kumisikidza uye kuti mhinduro dzeCOVID hadziwanzo gadziridzwa ipapo ipapo.
Mhinduro yeNew York State ndeyekuratidza kuti vashandisi vehurongwa vaende kune imwe yemarabhoritari pane chinyorwa Inosanganisira avo "vakazvipira" kugadzirisa ruzivo nekukurumidza sezvazvinogona. " SeArgentina, pese panorumbidzwa nenyika kuti ndinofarira kambani yakazvimiririra pane imwe, ndinofungidzira vavariro dzavo. Asi ngatipei New York bhenefiti yekusahadzika uye tidzokere kune zvakavanzika.
Kana iwe uchida kuisa chiitiko chakakura muNew York, unofanirwa kuratidza gwaro rekubaya kana chidzidzo chisina kunaka kune COVID kana, uchitadza icho, iyo QR inogadzirwa neExcelsior.
Zvekuvanzika zvinofungidzirwa kuti zvakavimbiswa nekuti kodhi yeQR inongosanganisira mamiriro ekupa mvumo (Kana iwe ukabaiwa jekiseni kana usina kuongororwa kuti wakanakira COVID), Zita rako nezuva rekuzvarwa. Iyo yakazvimiririra kunyorera iyo makambani anoshandisa kuverenga iyo QR Excelsior Pass, inonzi iyo NYS Scanner. inofungidzirwa kuti inobvisa ruzivo rwevanhu mushure meimwe scan.
Kupa runyararo rwepfungwa, vese nyika neIBM vanoti havasi kuwana chero nyowani data nezve vashandisi vanoshandisa chishandiso.Uye ivo vanojekesa kuti, kanenge New York yatove neinopedzisa dhatabhesi yeavo vese vakagamuchira mushonga kana vakaedzwa.
Nekudaro, hapana vimbiso yekuti data rakadai harizotorwa., Zvimwe nezvikumbiro zvepakutanga senge neshanduro dzisina mvumo.
Ehezve, munzira ipi neipi handireve kuti ndibvunze mukurumbira wakanaka weumwe munhu. Ini ndinongozvibvunza mibvunzo yakaita seiyi:
Nei pasina chero mutapi venhau akakumbira kuona iyo Excelsior sosi kodhi?
Ndiani iye anogara achimanikidza kuwanikwa kwekodhi yekodhi yezvishandiso zvinoshandiswa neHurumende?
Ndeipi kambani yakasimba kwazvo kurwisa iyo inogara ichisimbirira kuti kodhi yekodhi inofanirwa kuwanikwa?
Ndeipi kambani iri muridzi wekambani inotungamira inosemesa iyo inogara ichimanikidza kuwanikwa kwekodhi yekodhi?
Iye zvino ndinokusiya iwe, iyo ngowani yealuminium inosemesa kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Pasipoti yekudzivirira IBM neNew York. Chinhu chinokatyamadza
Iyo Intel i9 inoshanda zvirinani paWindows 10 pane Linux. Ichi ichokwadi here?